အချိန်ပြည့် PEDOPHILE မုဆိုးများဖြစ်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ဆယ်ဆယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည် - သတင်း
အချိန်ပြည့် pedophile မုဆိုးများဖြစ်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ဆယ်ဆယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်
၎င်းတို့သည် ၀ တ်စုံများ ၀ တ်ဆင်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူစွမ်းကောင်းစွမ်းရည်များရှိခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်နယူးကာဆယ် -on-Tyne မှလူနှစ်ယောက်သည်ဥပဒေကိုသူတို့လက်ထဲသို့ယူရန်နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များအတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေသည့် pedophiles များကိုဖမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Callum နှင့် Scott၊ ၂၂ နှစ်နှင့် ၂၅ နှစ်တို့သည်သူတို့၏ယခင်အလုပ်အကိုင်များကိုနှုတ်ဆက်ပြီး 'Dark Justice' ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ သို့သော် paedo မုဆိုးများအောင်မြင်ခြင်းသည်ရဲကို ၁၇ နာရီအလုပ်လုပ်ပြီးကူညီသည် ပုံမှန်အားဖြင့်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားလူငယ်များနှင့်မိန်းကလေးများအဖြစ်ဖော်ပြသည့်မီဒီယာအကောင့်များစွာကိုဖန်တီးပေးခြင်း။
Scott နှင့် Callum က Tab ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရမဟုတ်သော်လည်း၊ နှစ်ယောက်စလုံးသည် Dark Justice မတိုင်မီချက်ပြုတ်ခြင်းမှသည် web hosting အထိကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ in များတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူတို့စုံတွဲကသူတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာအလေးအနက်ထားသည်ရဲမှအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းအကြောင်းကို။
အမှောင်တရားမျှတမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိမ်းမြားမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်မဟုတ်၊ သူတို့ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယောင်ဆောင်သူများ၏ချဉ်းကပ်မှုကိုခံရဖို့သာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ Callum နှင့် Scott သည်မှတ်တမ်း၏သက်တမ်းကိုရှင်းလင်းစေပြီးဘာသာစကားကိုအသေအချာဆန်းစစ်သည်။ သတို့သား (ပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) သည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သားကောင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစားလျှင် DJ သည်တွေ့ဆုံရန်သဘောတူသည်။ ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီး pedophile ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည်။
ရဲများသည်အလုပ်ကိုမကူညီဘူးဟုဟန့်တားသောနိုးနိုးကြားကြားရှိသူများအဖြစ်စွပ်စွဲခံရပြီးနောက် DJ သည်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိအလင်းမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Callum နှင့် Scott တို့သည်သူတို့အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုထုတ်ဝေခြင်းမပြုရန်တားဆီးကြသဖြင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်ယခင်အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းသိပ်မသိရှိရပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လကသူတို့သည်တီဗွီအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ 'ဒီမနက်ခင်း' , သူတို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကိုကာကွယ်ရန်အနက်ရောင် hoodies ဝတ်ထား။ သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်၎င်းတို့၏ကိစ္စအတွက်လှူဒါန်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည် (အမဲလိုက်ခြင်းသည်မရသော) ကုန်သွယ် ၀ ယ်နိုင်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်4ပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင်သူသည်မက်ဆေ့ခ်ျ ၇၅၀ ကျော်ဖြင့်မျှဝေခဲ့သည့် ၁၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံမည့်အချိန်ထက်နယူးကာဆယ်မှ ၄၄ နှစ်အရွယ်ဒေးဗစ်ဟန်ဆန်သည် (အထက်တွင်ပုံဖော်ခဲ့သည့်) အမှောင်တရားမျှတမှုသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမကြာမီတွင်ပင်စိတ်ပျက်သွားခဲ့သည် ( ဒီမှာခဏစောင့်ကြည့်ပါ )
Dark Justice ဖန်တီးပြီးကတည်းကဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄ ယောက်တွင် ၂၃ ဦး သည်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပြီးကျန်သူများမှာမူရဲများကအာမခံဖြင့်ဖြစ်သည်။
တနင်္လာနေ့ ၂၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် Dark Justice သည် ၁၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဟုထင်မြင်သည့်အရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအပြီးတွင် Toby အမည်ကိုသုံးသော Jeremiah Mace (၆၅) နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဘယ်လို clit မိန်းကလေးများလက်ချောင်း
စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်များကမှုတ်သွင်း? ရဲများ၏အရည်အချင်းကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်? လိင်မှုကိစ္စပြုသူနှင့်ကလေးညှင်းပန်းသူများကိုမုန်းတီးခြင်းလော သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်လက်သို့ပညတ္တိကျမ်းကိုယူပြီးနှင့်ဗြိတိန်တွင်လေးနက်သောပြproblemနာဖြစ်လာသည်အဘယ်အရာကိုဖြေရှင်းဘို့ဟောင်းစားဖိုမှူးလေးစားဖို့ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ website ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီမှာ နှင့်သူတို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုလိုက်နာပါ ဒီမှာ